အမျိုးအစား: Computers & Internet
Power Bank - ဒါဘာလဲ။ Hyper ပါဝါဘဏ်
လျင်မြန်စွာဘက်ထရီကိုထမ်းရွက်ရန်ကိရိယာမှတက်ကြွစွာအလုပ်။ လူအတော်များများဟာအများဆုံး inopportune ယခုအချိန်တွင်a"ကိုချုံ့ထားပေးတာ" ဘက်ထရီတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့အမြဲတမ်းအာဏာကိုထွက်ပေါက်သို့မဟုတ် charger ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ မည်သို့မှ ...
ဒစ်ဂျစ်တယ် format ကိုသို့လက်ရေးစာသားမဘာသာပြန်ဆို - တခါတလေကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာ၏ပိုင်ရှင်မှပြဿနာက၎င်း၏ features တွေအဘို့အတော်လေးခက်ခဲသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျကို manually အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤနည်းလမ်းသည်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ် ...
သင် Minecraft လောကတွင်ပထမ ဦး ဆုံးပေါ်လာသည့်အခါသင်၌လုံးဝဘာမျှမရှိပါ။ သင်၏ပထမဆုံးအရင်းအမြစ်များကိုသင်၏ရှင်းလင်းသောလက်များဖြင့်ရရှိရန်နှင့်သူတို့၏အကူအညီဖြင့်သင်၏ပထမဆုံးပစ္စည်းများကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရလဒ်အတွက်ကစားသည်သို့မဟုတ် Sims-3 တွင်လိုအပ်ချက်များကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲ။
အဘယ်အရာကိုလူတွေလိုသလား? ဤမေးခွန်းကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာပြန်ဖြေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မည်သည့်အဖြေနေတုန်းပဲမပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်ကြောင့်? အဘယ်သူမျှမက, ဘုံရည်မှန်းချက်များလည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှိပါတယ် ... အားလုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ...
"Aliekspress" ကောင်းစွာဝယ်ယူမှုအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်တင်ပါစေသောအဖြစ်ဤကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းအကြောင်းပိုမိုသိရှိသူတိုင်းသည်လူတစ်ဦး။ အတော်များများကဒီတရုတ် site ကိုအတွက်ပစ္စည်းများနှင့်သိသိသာသာစျေးကွက်နှုန်းထားကိုအောက်တွင်ဒါစျေးနှုန်းများ။ အတော်များများကအချိန် ...
The Witcher 3: လမ်းလျှောက်သွားခြင်း။ "Count Royven ၏ဘဏ္Treာရေး," ပုံပြင်ရှာဖွေမှု
“ The Witcher 3” သည်လူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စေမည့်အခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စီမံကိန်း၏ပထမနှင့်ဒုတိယအပိုင်းများသည်လက်ရာမြောက်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်တတိယမြောက်မှာပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးကစားသမားအားလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်ပေးသည်။
ယင်း setting တွင်တူးတချို့ကဖုန်းကိုအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးနားမလည်အတိုကောက် TTY ဒါမှမဟုတ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ "teletype mode ကို" ကြုံတွေ့။ ဒါ့အပြင်အိုင်ကွန်၏ဝိသေသမျဉ်းစမတ်ဖုန်း status ကိုအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦး TTY ဖုန်းကိုကဘာလဲ? အဘယ်အရာကို ...
သငျသညျအံ့အားသင့်ပေမယ့် browser ကိုပြီးသားနှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပါတယ်တို့တွင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းအားလုံးအသုံးပြုသူများကွန်ပျူတာများတွင် "Google Chrome က" install ဖို့ဘယ်လိုသိကြမယ့်, ဤစေခြင်းငှါ ...
Crysis ဤစကားလုံးသည်သေနတ်သမား၏အမည်မျှသာမဟုတ်ပါ။ ဒီဂိမ်းကအမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်ဆုအတွက်ဂုဏ်ထူးဆောင်ခေါင်းစဉ်ကိုအမြဲတမ်းရရှိသည်။ အပိုင်းအသစ်တစ်ခုစီသည်လူတိုင်းလမ်းပြနေသောနောက်ဘားကိုသတ်မှတ်သည်။
ကောင်းပြီကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့အချို့ပိုက်ဆံတက်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်သူ၏အိပ်မက်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးကောင်းသောဂိမ်း console ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီပွီ! ကျနော်တို့ဂိမ်း၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဤလောကသို့ငုပ်ရန်စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ကြပြီးပေး၏ ...
ဂိမ်းထဲမှာအီစတာကြက်ဥ - ကဘာလဲ? Outlast, Minecraft နှင့် GTA-5 ဂိမ်းများနှင့်အီစတာဥများ
“ အီစတာဥ” သည်ဂိမ်း၊ ရုပ်ရှင်နှင့်ဆော့ဝဲလ်များတွင်“ အီစတာဥများ” ၏ဘန်းစကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများသည်ယေဘူယျအကြောင်းအရာနှင့်မကိုက်ညီပါ၊
Warcraft3များအတွက်အပိုဆောင်းလှုပ်ရှားမှုများ: ရေခဲပလ္လင်ချက်ချင်းနီးပါးမူရင်းဂိမ်းလွှတ်ပေးရန်ပြီးနောက်ပေါ်လာတော့တယ်။ တောင်မှဆယ်နှစ်ပြီးနောက်သူတို့နေဆဲလူကြိုက်များကြသည်။ ပရိသတ်တွေနဲ့ဂိမ်းကစားသည့်ကုမ္ပဏီများအဖြစ်ဖန်တီးကင်ပိန်း ... ။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အား "အဆက်အသွယ်" တွင်မည်သို့တားမြစ်ရမည်နည်း။
လူပုဂ္ဂိုလ်ကို "ဆက်သွယ်ရန်" တွင်မည်သို့တားမြစ်ရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင်နှင့်စကားပြောမည်။ ဒါ့အပြင်ဒီ function ကဘာကိုပေးမယ်ဆိုတာကိုသင်နဲ့အတူတွက်ကြည့်ရအောင်။ အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်ပိုလိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ...
"СССР၏အမှတ်တံဆိပ်" - ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းများ
သင်ကဂိမ်းအပါအဝင် applications များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး, ပေါ်သို့တင်ဆောင်ခဲ့သည်တစ်ကြိမ်ထက်ထို့နောက်ဆက်ဆက်ပိုပြီး OS ကို "အန်းဒရွိုက်" အပြေးတစ်ဦးကမိုဘိုင်း device ကို, ပိုင်ဆိုင်လိုလျှင်။ ဒီနေ့ရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ...
တင်ပြချက်များအတွက်တစ်ဦးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဘယ်လောက်၏မေးခွန်းကိုပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အခါ, လူများ၏အများစုမျှသံသယ Microsoft ကတစ်ဦးဟုလူသိများ PowerPoint program နဲ့တစ်ဦးပေါင်းသင်းမှုလည်းမရှိ။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများဖန်တီးဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,167 စက္ကန့်ကျော် Generate ။